Wararka - Cajaladaha aluminium ee aluminium ee aadan waligaa isticmaalin
Markay tahay cajaladda aluminium aluminium, waxaan aaminsanahay inaynu dhammaanteen aqoon u leenahay, maadaama badanaa laga arki karo qaybta qalabka guryaha.
Ugu horreyntii, cajaladda aluminium ee aluminiumku waxay ka samaysan tahay xabag cadaadis leh oo xasaasi ah, oo lagu daray astaamaha aluminium-bireedka iska caabinta heerkulka sare, aan la mari karin, sidaa darteed waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan oo dahaadh ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay waxyaabo milicsiga noloshayada, foornooyinka, microwave foornooyinka ayaa lagu dabaqi doonaa. Dabcan, waxaa sidoo kale jira codsiyo badan oo ku saabsan warshadaha baabuurta.
Hoos waxaad ka heli doontaa wax yar oo ka mid ah alaabooyinka aluminium ee ugu muhiimsan.
(A) Cajalad aluminium ah oo caadi ah oo la duubay / aan duubnayn
Badeecadani waa badeecad caan ku ah suuqa, nafwaayaha wanaagsan, daboolka wanaagsan, shaqada gaashaan ee elektromagnetic. Waxaa badanaa loo isticmaalaa gaashaamida elektromagnetic ee noocyada kala duwan ee alaabta elektarooniga ah, iyo kuleylka kuleylka ee qalabka guryaha iyo ganacsiga.
(B) Hal iyo laba-geesood oo aluminium ah oo duuban oo leh xoojin
Badeecadani waa shey isku dhafan oo leh xoojinta dunta dhalada ee udhaxeysa aluminium iyo warqad kraft ah, oo leh shaqooyinka cajalad aluminium caadi ah, laakiin sidoo kale biyuhu, caaryada-cadeynta iyo kuleylka kuleylka. Waxaa loo isticmaalaa dahaadhka dhuumaha, ilaalinta bannaanka ee kululaynta iyo qalabka qaboojinta, iyo kuleylka kuleylka dhismooyinka iyo hudheelada.
(C) Cajaladda aluminium ee fiber fiber-ka ah
Badeecadani waxay ka samaysan tahay aluminium aluminium ah iyo maro dhalo ah oo galaas ah ka dib markii ay isku dheggan tahay, oo leh waxqabadka uumiga uumi-biyoodka wanaagsan, waxqabadka ka-hortagga oksaydhka, aashitada daciifka ah iyo caabbinta alkali, qarax-caddayn iyo olol-celin. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daboolida tuubooyinka iyo dhisida lakabyo milicsiga ah ee nidaamyada kululaynta dabaqa korantada.
(D) Cajalad aluminium ah oo olol celinaysa
Cajalad isku-dhafan oo olol-celis ah oo leh aluminium saafi ah oo ah maaddada aasaasiga ah, ku dheji alaabada ololka, ka dibna waxqabadka wanaagsan ee warqadda go'doominta silikoon cad sida isku-darka safka. Iyada oo leh diir sare, isku dheelitirnaan wanaagsan oo bilow ah, isku-xirnaan, sifooyin holac olol wanaagsan. Waxay ku habboon tahay marinnada hawada, darbiyada, iyo dahaarka biraha, iyo sidoo kale dahaadhka baabuurta iyo tareenka, dahaarka tuubada markabka, iwm.
(E) rinjiga madow ee aluminium aluminium ah
Si shaqaaluhu ugu shaqeeyaan jawi dheer oo ku shaqeeya isha bini'aadamka ma dareemi doono daal, dusha sare ee la isticmaalayo daahan madow. Waxay leedahay shaqooyinka nuugista iftiinka, nuugista codka, qoyaan-caddeynta, ka-hortagga daxalka, kuleylka kuleylka, ilaalinta kuleylka, ololka, iyo wixii la mid ah. Waxay inta badan ka ciyaareysaa doorka ilaalinta qafiska ilaalinta ee hoolka xafladaha iyo hoolalka xafladaha.
(F) Cajaladda filimka ee aluminium-ku dahaadhan
Badeecadani waxaa lagu daboolay lakabka aluminium aluminium ee filimka, kuleylka kuleylka, ka hortagga daxalka, gaashaan elektromagnetic, sifooyin xoog leh. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta gudaha, daabacaadda warshadaha iyo deegaanno kale.